भारतमा देखिएको निपाह भाइरस संक्रामक बन्दै, नेपालमा सतर्कता | Supremekhabar
२०७८ भदौ २८, सोमवार, ८: ०८AM
तुलनात्मक रुपमा कुनै रोग भारतमा फैलन सुरु भए पश्चात नै नेपालमा त्यो रोगको जोखिम रहेको बताइन्छ । पछिल्लो साता भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण फैंलदै जान थालेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसको जोखिमबारे सचेत गराएको हो । स्वाथ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले यो भाइरस अहिलेसम्म नेपालमा देखा नपरेको भए पनि सतर्कता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यो रोग विशेषगरी चमेरा र बङ्गुरबाट सर्ने भएकाले भारतबाट चमेराहरु बसाई सरी आउन सक्ने भएकाले नेपालमा यसको जोखिम रहेको अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले काठमाडौको नारायणहिटी दरबार छेउछाउमै अत्याधिक चमेराहरुको बसोबास रहेकाले पनि यसको जोखिम बढी रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो समुदायमा कतिपय व्यक्तिहरुले फलफूलहरु नधोई खाने र बङ्गुरको व्यवसायिक पालन नै गर्ने देखिएकाले पनि यस्को जोखिम बढी छ” उहाँले भन्नुभयो ।
सन् १९९९ मा पहिलो पटक मलेसियामा बङ्गुरमा यो भाइरस फेला परेको हो । जनावरबाट मानिसमा सर्ने भएकाले यो भाइरसलाई जिनोटिक भाइरस भनिन्छ । त्यसयता अहिलेसम्म यो भाइरस मलेसियामा देखापरेको छैन । यो भाइरस सन् २००१ मा बङ्गलादेशमा देखापरेको थियो । त्यसयता यसले व्यापक रुप लिन थाल्यो । पछि पूर्वी भारतमा पनि देखा पर्न थाल्यो । घाना, कम्बोडिया, ईन्डोनेसिया, माडागास्कर, फिलिपिन्स र थाईल्यान्डमा पनि यो भाइरस देखा परिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
निपाह भाइरस संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरुलाई कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गरेर परिक्षण गर्नुपर्ने डा.पुनको भनाई छ । यस्तै घरपालुवा जनावरहरुलाई रुघाखोकि लागेको भए भेट्नरी डाक्टरहरुमार्फत स्वाव सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउन उहाँको आग्रह छ । -गोरखापत्र
अघिल्लो लेखमाकाँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन : कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने
अर्को लेखमाविद्यालय सञ्चालनकाे अनुगमन पालिकाले गर्नु पर्ने डीसीसीएमसीकाे निर्णय